China inopisa inotengesa yakachipa vana sikuta / 2 mavhiri vana kukanda sikuta nebarbar / yakanakisa scooter yevana bhasikoro vagadziri uye vanotengesa | Kunaka Bike
Nhamba ye Wheel:
Isina simbi, nylon, pp
vana yakachipa scooter / yemwana bhasikoro scooter / vana kiki sikuta
chero mavara aunoda
Pingi kana chero mavara iwe aunoda
10000 Piece / Pieces por Day vana zvakachipa sikuta / mbudzana bhasikoro scooter / vana kava sikuta
1piece / bhokisi, 4 / 6boxs / katoni, En 14619 inopisa inotengesa yakachipa vana sikuta / 2 mavhiri vana kukanda sikuta ine mubato / akanakisa scooter evana bhasikoro
Hunhu vana sikuta: iyo sikuta ndiyo nyowani yakatsetseka kutasva, kunakidzwa kutsvaga 2 vhiri sikuta. Tasva muchitaera nemwenje kumusoro mavhiri uye ane mavara magadzirirwo. Yakagadzirwa neyakasimba zvinhu izvo zvakavakirwa kuti kunakidzwa kwekupedzisira!
Yakasimba simbi furemu & inogadziriswa mabhurebhu: iyo sikuta yakavakirwa Kupedzisira neyakaizara simbi furemu uye simbi yakatsigirwa inoumbwa dhizaini. Kwete chete mahabharabha anokwanisa kuchinjika kune vana vadiki uye vakuru, iwo ekubata anewo echinyakare mawoko ekubata ayo akasununguka uye akachengeteka kana uchikwira. Maviri anogadziridzwa kukwirira magadzirirwo kubva 27.5 "kusvika 32".
Grip tepi Yakafukidzwa dhizaini ine inotonhorera dhizaini: Iyo vhiri scooter inoratidzira grip tepi Yakavharwa dhiketi kune yakanyanya kugadzikana uye kutonga nepo scooter asi zvakare inopa iyo scooter kutonho uye yakasarudzika kutaridzika kusiyana nechero imwe scooter kunze uko! Scooter anouya nemarudzi akasiyana; bhuruu, orenji, pinki zvichingodaro. Imwe neimwe iine yayo yakasarudzika yekubata tepi dhizaini.
Nyore kushandisa kumashure mabhureki ane mwenje kumusoro mavhiri: Iyo mavhiri scooter inoratidzira hombe, simbi Rear tsoka bhureki yekumira inokurumidza, yakachengeteka uye yakapusa kumira. Mavhiri ese ari maviri anovhenekera paunenge uchikwira!
Makuru 125mm mavhiri ane mashanu mabheyari: kuchovha nekukurumidza uye mushe pamwe neyedu huru 125mm PU mavhiri uye mhando shanu mabheyaringi.
KUREZESA & KUKUNDA
Katoni Saizi Rimwe katoni (pcs) / kg Zvakawanda / atorwa Zvakawanda/ pcs Zvakawanda / kg
65 * 25 * 25cm 20 pcs / 19kg 729 katoni 14580bv 13851 makirogiramu
65 * 25 * 35cm 10pcs / 9kg 567pabhokisi 5670 zvidimbu 5103 makirogiramu
65 * 25 * 30cm 60pcs / 11kg 648 atorwa 388pcs 7128kg
73 * 40 * 25cm 10pcs / 11kg 432 katoni 4320 pcs 4752 makirogiramu
43 * 33 * 34cm 40pcs / 10kg 637 atorwa 25480pcs 6370kg
TERMS & BASA
Nguva yokutora 20-35mazuva mushure mekugamuchiraing mubhadharo we30% dhipoziti.
Kubhadhara -Iinogadzirisika L / C. pakuona.
-30% T / T. pamberi uye 70% bhalanzi kurwisa kopi ye B / L.
-D / P pakuona.
Kurongedza -Imwe seti pamwero wakajairika wekutumira makatoni.
-85% SKD, 50% SKD uye CKD.
-Maererano ne chikumbiro chevatengi.
Tinokukoka nemwoyo wese kuti usiye mhinduro yakanaka kwatiri kana uchifarira yedu ptsvimboucts. Kana iwe uine chero mibvunzo, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu chero nguva inogoneka.
Mushure mekutengesa Chero mubvunzos yekugadzirwa, ndokumbira undizivise zvakananga neemail kana nhare. We anogona kubata nenyaya idzi nenguva, kuvimbisa kukupa mhinduro dzinofadza.
We yakatarisa pane yakatevera sale. WElcome tumira chero mhinduro kwatiri.
Pashure: Kuchengetedza vana vanofamba-famba mota yemwana / Yevacheche plasma yemari mutengo mufekitori / vana vanokanganisa mota yevana kukwira
Zvadaro: inopisa kutengesa nhema uye tsvuku kavha sikuta / mini vhiri chiyero sikuta nePU vhiri / 3 vhiri mwana sikuta